DAB-DAMIS: Sergio Ramos Oo Mar Kale Beeniyay Hadalkii Uu Saxaafada Ka Hor Sheegay -Miyuu Go'aanka Ganaaxa UEFA Wax Ka Badali Karaa? - GOOL24.NET
DAB-DAMIS: Sergio Ramos Oo Mar Kale Beeniyay Hadalkii Uu Saxaafada Ka Hor Sheegay -Miyuu Go’aanka Ganaaxa UEFA Wax Ka Badali Karaa?
Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa afkiisa xaalad xun iskugu abuuray kadib guushii Ajax ee kulankii Champions league kadib markii uu si aan gabasho lahayn u qirtay in uu isagu sabab u ahaa in kaadhkii digniinta ahaa ee kulankii Ajax uu qaatay si uu ugu si meel banaysto heerarka soo socda ee Champions league oo aanu ganaax ugu maqnaan siddeed, dhamaadka, afar dhamaadka ama heerarka ka danbeeya.
Sergio Ramos ayaa soo muuqday isaga oo ciyaartoyda kooxdiisa Real Madrid iyo Nacho iyo Luka Modric waydiinaya in uu raadsado kaadhka digniinta ah wuxuuna kadib qalad ku galay xidiga kooxda Ajax ee Kasper Dolberg taas oo keentay in daqiiqadii 88 aad ee dhamaadkii kulankii Ajax kaadhka digniinta ah loo taagay.
Kaadhka digniinta ahaa ee uu Sergio Ramos qaatay kulankii Ajax waxa uu si rasmi ah sabab ugu noqon doonaa in uu seego kulanka lugta labaad ee wareega 16ka kooxood ee Bernabue ku dhex mari doona Ajax iyo Real Madrid laakiin hadda arintu sidaas way ka culus tahay kadib markii ay UEFA ku dhawaaqday in ay baadhitaan ku samaynayso kiiska Ramos.
Laakiin Sergio Ramos ayaa markii labaad isku dayay in uu beeniyo hadalkii baxay ee uu saxaafada ka hor sheegay kadib kulankii Ajax wuxuuna badalay sababta iyo qaabkii uu hadalkiisa u dhigay inkasta oo aan la filayn in ay wax uga qaban doonto ganaaxa uu UEFA kala kulmi doono.
Sergio Ramos oo iska difaacaya eedaynta iyo ganaaxa uu UEFA kala kulmi karo ayaa yidhi: “Anigu dhamaan waxyaabahan waan la yaabay. Anigu waxaan u jeEday in aan qaladka qasbo, wuxuu ahaa qalad aan la fursan karin, may ahayn in aan ganaaxa qasbado”.
Sergio Ramos oo qiriya in uu qaladku ahaa mid uu qasab ka dhigay balse aanu doorasho kale haysan waqtigaas ayaa yidhi: “haa, laakiin doorasho maan haysan. Waxa uu ahaa weerar deg deg ah oo daqiiqadii 8 aad ahaa iyada oo kulanku aad u furnaa”.
Intaa kadib Sergio Ramos ayaa isku dayay in uu dib u saxo hadalkiisii hore wuxuuna yidhi: “Taasi waxay ahayd sababta aan u sheegay in aanan been sheegayn haddii aan sheegay in aanan ogayn in la i ganaaxi doono, maadaama oo aan ogaa in aanan doorasho kale haysan, laakiin ay ahayd in aan qalad sameeyo. Taas ayay ahayd waxa aan micnaheeda ula jeeday markii aan idhi in kubbada cagta ay waajib kugu tahay in aad go’aan adag qaadato”.
Sergio Ramos ayaa isku dayay in uu raadiyo cudur daar laga aqbali karo wuxuuna yidhi: “Haddii aan doonayo in aan ganaaxa qasbo, waxaan samayn karayay heer groupyada ee kulankii Roma, sababtoo ah markaasba kaalinta kowaad ayaanu ku soo baxnay iyo kulankii ugu danbeeyay ee CSKA Moscow ee kulan aan aniga la yeedhin”.
Si kastaba ha ahaatee, beeninta hadalka Sergio Ramos ee waraysigii uu bixiyay kadib kulankii Ajax ayaa ku soo aadaya waqti ay UEFA xili horeba bilawday baadhitaanka dhacdadii uu Ramos kaadhka digniinta ah ku qaatay, waxayna si rasmi ah UEFA u shaacisay in ay baadhitaankan wado kaas oo go’aan laga gaadhi doono ka hor kulanka lugta labaad ee UEFA Champions league.